BMW Australia waxay si adag u xadidi doontaa qoondeynta noocyada cusub ee X7 Dark Shadow Edition ee loo yaqaan 'xDrive30d iyo M50i', waxaana laga bilaabi doonaa gudaha bisha Maarso 2021, iyadoo leh shan kaliya oo nooc kasta ah. Dukaanka BMW wuxuu fududeeyaa boos celinta iyadoo ubaahan lacag dhigaal ah $ 5,000, ka dibna amarka la dhigo oo la siiyo ...
F15 X5 wuxuu badalayaa isla lever marshada lever ee X7, waa halkaan maanta!
Gudaha cusub ee BMW, wareegga 'crystal' iyo burooyinka ayaa la oran karaa waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee kor u qaadaya qaabka gudaha. Waxaa hadda loo adeegsadaa noocyada cusub ee X5, X6, X7, 8 taxane iyo moodooyin kale, laakiin moodelladii hore waxay u baahan yihiin in wax laga beddelo. Ma ahan wax adag ...
Qalabka cusub ee BMW 3 Taxanaha sare ee lever gear?
Tan iyo markii la bilaabay moodooyinka BMW oo leh sumadda G chassis, badhamada ayaa lagu dhex daray aagga wareejinta, iyagoo noo keenaya fikrado badan oo cusub. Isku-darka bilawga hal-batoon, bilow-joojin otomaatig ah, habka wadista, iyo gacan-qabsiga elektiroonigga ah wuxuu leeyahay dareen teknoolojiyad ...
Marka la eego isbeddelka suuqa adduunka iyo dhaqaalaha "cusub ee caadiga ah", Quadrangle wuxuu hayaa wado dheer oo uu maro.
Quadrangle wuxuu si isdaba joog ah u dardargelinayaa hal-abuurnimada iyo isbeddelka shirkadaha, waxaana ka go'an inuu noqdo shirkad leh shirkad caan ah oo caan ah, horumarin kaladuwan, hawlgal caalami ah, iyo isku-darka wax soo saarka iyo iibka. Marka la eego isbeddelka suuqa adduunka iyo econ ...
Ku soo dhawow bogga Mankalei Brand New, Mankalei Lab ayaa si buuxda loo casriyeeyay bishii Luulyo, iyada oo la siinayo alaabooyin badan oo cusub, adeegyo badan, oo adduunka oo dhan wajahaya. Waxaad sidoo kale raaci kartaa akoonadeena baraha bulshada si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeyay ee naga mid ah, waxaad ka heli kartaa iskuxirka warbaahinta bulshada ...